Saturday June 23, 2018 - 11:01:38 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in isku day dil uu ka badbaaday Abeey Axmed oo ah R/wasaaraha wadankaasi.
Abeey Axmed Sawir hore
Wakaaladda wararka ufaafisa dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in qarax Bambaamo uu ka dhacay goob isku imaatin ah oo uu khudbad ka Jeedinayay Abeey Axmed balse lama sheegin khasaaraha rasmiga ah ee qaraxa ka dhashay.
Video lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay R/wasaaraha Itoobiya oo markii uu khudbad jeediyay kadib uu qarax xooggan goobta ruxay kadibna ciidamada ammaanka ayaa si degdeg ah goobta ugala cararay.
Qaraxan lala beegsaday R/wasaaraha Itoobiya ayaa imaanaya xilli isbedel siyaasadeed uu wadanka ka dhaqan galay balse wali waxaa jira xoogag mucaaradsan Taliska Xabashida.
Abeey Axmed ayaa khudbad gaaban oo uu ka jeediyay Telefeshinka afka dowladda ku hadla wuxuu ku sheegay in khasaara dhimasho iyo dhaawac ah uu ka dhashay isku dayga ladoonayay in lagu khaarijiyo wuxuuna weerarka ku eedeeyay dhinacyo doonaya in aan la arkin Itoobiya oo mideysan sida uu hadalka u dhigay.
Laba isbuuc oo kaliya ayaa laga joogaa markii baarlamaanka Itoobiya uu ku dhawaaqay in uu qaaday xukunkii xaaladda degdegga ee wadanka lagusoo rogay.